All Burma Students’ Democratic Front | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Posts Tagged ‘All Burma Students’ Democratic Front’
Myanmar Muslims are proud of ABSDF-N SMAR Nyi Nyi’s beard
ခိုင်ထူးသီချင်းသွားသတိရလို့ ….. ဒို့လာပြီ…. Min Min Latt (ဆမား ညီညီ) အဲဒီတုန်းကမြောက်ပိုင်း AB မှာ လူ ၂၅၀ ခန်.ရှိတာမှာ လူ ၁၀၀ ကျော်အဖမ်း
We hereby wish to request my brother SMAR = village near the ABSDF -N camp = SHEIK Mohamad Abdul Raof to publish the names of Muslims he know in ABSDF -N.
Tags:All Burma Students' Democratic Front, Asia, Burma, Muslim, Myanmar, Rakhine State, Rohingya people, Thein Sein
Baydar Lam postedaphoto to my FB Wall.
ကိုကိုကြီး (၈၈ ) မျိုးဆက်ခင်ဗျာ….
ခင်ဗျာ: messenger ဂျာနယ်ထဲမှာပြောသွားတဲ့စကားလုံး တွေကိုဆွေးနွေးချင်လို.ပါ။
အဲဒီစကားလုံးတွေက အခြားသူတွေသုံးရင် ပြသ၁နာမရှိပေမဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ထဲက ပြောသွားတာ ကတော့ လက်မခံနိုင်ပါ။
ကိုကိုကြီးက ” ဒီကိစ္စကြီးက သံသယရဲ. ဓါးစာခံတွေ သားကောင်တွေ ခေတ်ကာလ အခြေ အနေမှာ မှားယွင်းမှုတွေ လို.” ပြောသွားပါတယ်။
ဒီကိစ္စက အဲဒီလို လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး၊ ကြိုတင်ကြံစီပြီးမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စပါ။
Tags:All Burma Students' Democratic Front, Non-governmental organization
Tags:All Burma Students' Democratic Front, Burma, Ethnic group, Maung Maung Wann, Non-governmental organization